Ururada Shaqaalaha Suuqa | Vaikuttajan reittikartta
Ururada Shaqaalaha Suuqa
Ururada shaqaalaha Suuqa waa ururro matala shaqaalaha ama shaqaaleeyaha. Ururrada shaaqalaha suuqa wuxuu u gorgortamaa xuquuqda iyo manfacadaha shaqaalaha, sida mushaharka iyo saacadaha la shaqeeyo.
In kabadan boqolkiiba 70 ee dadka Finns waxay ku jiraan ururro shaqaale, tusaale ahaan, iskaashatada ganacsatada. Iskaashatada ganacsatada badankooda waxaa abaabula dad isku xirfad ama kuwa heley waxbarasho isla mid. Dhamaan shaqaalaha Finland waxay xaq u leeyihiin in ay galaan iskaashato oo ma jirto shirkad loo ogol yahay in ay xuquqdan xadido.
Ma jiro wax kaa hor istaagan in aad ku biirto iskaashatada ganacsatada xitaa da’ kasta ama xitaa haddii wax dhibaato ah aadan shirkadaada ku qabin. Iskaashatada ganacsatada badankooda sidoo kale waxay leeyihiin ururru arday iyo mashaariica dadka dhalin yarta kale ee la socota. Ururka Finnish ee Middowga Ganacsiga Bartamaha (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK), Shaqaalaha Iskaashatada Finnish (Toimihenkilökeskusjärjestö STTK) iyo Middowga Iskaashatada Shaqaalaha Maamulka iyo Xirfadda ee Finland (Korkeakoulutettujen ammatillinen keskusjärjestö AKAVA) waa iskutag ururro iskaashato dhexe ee dalkan Finland.
Sidoo kale shirkadaha wax shaqaaleeya ee dalkan Finland iskaashatooyin ayay sameysteen. Shirkadaha iIskaashatada ganacsatada ee Findland waxaa mata Elinkeinoelämän keskusliitto EK.
Milkiilayaasha Miiyga iyo Wax Soo Saarka Beeraha ee Middowga Bartamaha (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry) waa urur ganacsi qaran ee beeraaleyda, milkiilayaasha miyga iyo ganacsatada miyi baaddiye.